Afrika, 26 November 2019
Talaado 26 November 2019
Xisbiga Soomaalida Itoobiya oo ku biiray Xisbiga Prosperity
Xisbiga Dimqoraadiga ah ee Soomaalida Dawlad-Degaanka Itoobiya ayaa maanta guddigiisa fulintu uu ansixiyey ku biiritaanka Xisbiga Cusub ee Prosperity Party oo dhowaan la isku raacay inuu beddelo xisbiga Talada Haya ee EPRDF.
13 askari oo Faransiis ah oo ku dhintay dalka Mali
13 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka Mali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaarad oo helicopter ah, xilli ay ku guda jireen howl-gal ka dhan ah jihaadiyiinta waqooyiga dalkaas, waxaa sidaas maanta sheegtay madaxtooyada Elysee.
Dadweynaha Guinea-Bissau oo Dooranaya Madaxweyne
Madaxweyne Jose Mario Vaz ayaa ka mid ah 12 musharax oo u tartamaya iney hogaamiyaan dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Vaz ayaa ah madaxweynihii u horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doorto ee dhameysta muddo xileedkiisa taariikhda dalkaaasi.
Dad ku dhintay diyaarad ku dhacday Congo
Ugu yaraan 19 qof oo isugu jray rakaab iyo shaqaalihi diyaaradda ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, kaddib marki ay diyaarad nuuca yar ay ku dhacday xaafado la daganyahay oo ku yaalla magaalada Goma ee dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo.
Natiijada Afti Qowmiyadda Sidama ee Ethiopia oo Lagu Dhawaaqay
Waxaa lagu dhawaaqay natiijada afti laga qaaday Arbacadii dadka laga tirada badanyahay ee Sidama ee dega qeyb ka mid ah koonfurta dalka Ethiopia. Aftidan ayay qowmiyadda Sidamadu ku doonayeen inay ku yeeshaan dowlad-goboleed la mid ah kuwa qowmiyadaha kale ee Ethiopia ay leeyihiin.
Djibouti: Khilaaf ka taagan guddi uu magacaabay Geelle
Dalka Djibouti ayaa waxaa ka taagan dood la xiriirta go’aan lagu magacaabay guddi qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale masuuliyiinta xilalka loo magacaabo, ka hor inta aan Golaha wasiirada la horgeyn.
Xasuusta Shirki Berlin ee 1884 ee Africa lagu qeybiyay
135 sano ayaa todobaadkan laga joogaa, marki uu billowday shirkii Berlin ee sannadki 1884-ki ay qaar ka mid ahi dalalka Yurub ku kala qeybsadeen Qaaradda Africa si ay u gumeystaan.
Askar ka tirsan ciidamada Burundi oo weerar lagu laayey
Ugu yaraan sideed askari oo u dhashay dalka Burundi ayaa lagu dilay weerar xilli habeen ah lagula beegsaday kayme u dhow xuduudda dalka Rwanda, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga dalkaas.
Qowmiyada Sidama ee Itoobiya oo u codeynaya afti Is-maamul
Dadweynaha qowmiyadda Sidama ee dalka Itoobiya ayaa la filayaa inay maalinta arbacada ah u codeeyaan inay noqdaan gobol gooni u taagan – tallaabadaas oo dhallin karta xasilooni darro dheeri ah oo ka dhacda dalka, ka hor doorashooyinka qaran ee sanadka xiga.
Al-Shabaab oo lagu arkay degaan cusub oo ka tirsan Sanaag
Dadka degaanka iyo ilo dhinaca amniga ah ayaa idaacaadda VOA u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu arkay degaan lagu magacaabo Gacan Maroodi oo hoos taga degaanka kale ee Yubbe.
ONLF oo dooratay hoggaan cusub
Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maadey) ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee ururka ONLF oo sannado badan la dagaalamayey dawladda Itoobiya balse sannadkii hore heshiiska la galay xukuumadda Abiy Ahmed.
Madaxweynayaashii hore oo u digay dawladda federaalka
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyey dawladda federaalka inay isku dayday in diyaaraddooda laga hor istaago inay ku degto garoonka diyaaradaha ee Beledweyne